मुगु पुगेर बिरामी जाँच्दै डा. केसी- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २३, २०७७ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाभित्रको शक्ति र सत्तासंघर्ष चरम उत्कर्षमा छ । र, यसको सिधा असर उसको आन्तरिक जीवन र सरकारको कार्यसम्पादनमा परेको छ । स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सुशासन दिने नारासहित तत्कालीन वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको नेकपाले झन्डै दुई तिहाई मतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो । तर, अहिले त्यो मत नेकपाका लागि भारीजस्तो भएको छ ।
के नेकपाले आफ्नो जिम्मेवारी, जवाफदेहीता र जनमतमाथि खेलबाड गरिरहेको छ, अनि यस्तै विवादले नेकपा एउटै पार्टी बनिरहन कति सम्भव छ ? यिनै विषयमा राजनीतिक विश्‍लेषक श्याम श्रेष्ठसँग बबिता शर्मा र कञ्‍चन अधिकारीले गरेको कुराकानी–